2014 ~ Myaylatt Daily.
မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ(ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(မြေလတ်ဒေသ)) မှ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၊ NNER ကြေငြာချက် ၊ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(မြေလတ်ဒေသ)၏တိုက်တွန်းချက် စသည်တို့ကို ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ဖြန့်ဝေနေပုံ
8:13 PM သတင်း No comments
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် (မြေလတ်) shared မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ's post. မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Credictးမကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ
မကွေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ added 18 new photos — with Htet Shine.
31.12.2014 ရက်နေ့ မနက် 8:30 ခန့်တွင်
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို သေချာဖတ်မိသိရှိစေရန်နှင့် ထိုဥပဒေအပေါ် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ များအဖွဲ့ချုပ် (မြေလတ်ဒေသ)၏သဘောထား ကြေငြာချက် နှင့် NNER (National Network for Education Reform )အဖွဲ့တို့မှသဘောထားများ
ကျောင်းသား/သူ ၊ မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျာ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြဌာန်းထားသော အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို သေချာဖတ်မိသိရှိစေရန်နှင့် ထိုဥပဒေအပေါ် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂ များအဖွဲ့ချုပ် (မြေလတ်ဒေသ)၏သဘောထား ကြေငြာချက် နှင့် NNER (National Network for Education Reform )အဖွဲ့တို့မှသဘောထားများကို ကျောင်းသားကျောင်းသူများ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ စုံရေပေါင်း (၂၀၀၀၀)(နှစ်သောင်း)စုံ ကို မကွေးတိုင်းဒေသတွင်းရှိတက္ကသိုလ်များနှင့် မြို့တွင်းတို့တွင် ယခုအပတ်အတွင်း ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်
မကွေတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ငဖဲမြို့မရဲစခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
4:10 PM သတင်း No comments
ငဖဲ ဒီဇင်ဘာ ၃၀
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ငဖဲမြို့မရဲစခန်းရှိ အချုပ်ခန်းများကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွတ်တော် တရားသူကြီး ဒေါ်နုယဉ်က ယနေ့နံနက် ၁၀နာရီတွင် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရာသို့ တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ဒေါ်နုယဉ်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ရုံးအဖွဲ့မှူး ဒေါ်ခင်စိမ်းဝင်း၊မင်းဘူးခရိုင် တရားသူကြီး ဒေါ်သီမာနွယ် ငဖဲမြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်လေးလေးနွယ်တို့ လိုက်ပါလျက် ငဖဲမြို့မရဲစခန်းအတွင်းရှိ အချုပ်ခန်းမှ အချုပ် တရားခံများ အချုပ်ခန်းတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ရသင့်ရထိုက်သောအခွင့်အရေးများ ခံစားရခြင်း ရှိ/မရှိ သင့်တင့်မျှတသော အစားအစာ အာဟာရ စားသုံးရခြင်း ရှိ/မရှိ ၊မကျန်းမာပါက ဆေးကုသရန် အခွင့်အရေး ရှိ/မရှိ များနှင့် အချုပ်သားနှင့်ပတ်သက်၍ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေများကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ပေါက်မြို့နယ်မှ နားမကြားလူနာများအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေး
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံကြီးတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်တိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပေါက်မြို့နယ်မှ နားမကြားသူများအား ခွဲစိတ်ကုသပေးမှု အား ယနေ့ ညနေ ၄ နာရီကတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဘုန်းမော်ရွှေနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည်။
ရှေးဦးစွာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဘုန်းမော်ရွှေသည် တိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံကြီး နား၊နှာခေါင်းခွဲစိတ်ဆောင်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါက်မြို့နယ်မှ နားရောဂါဝေဒနာရှင်များမှ အကြီးစား ခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးစီးသော လူနာရှင်များအားတွေ့ဆုံ၍ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်။ထို့နောက် တိုင်းဒေ သကြီးကျန်းမာရေးဦးစီိးဌာနမှူးနှင့်နားခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာစိမ်းလဲ့သွင်တို့မှ လူနာအလိုက် ခွဲစိတ်ဆောင်ရွက်ထားမှုအခြေအနေ ပြန်လည်တိုးတက်လာမှုအခြအနေတို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများက လူနာများအား ထောက်ပံ့ငွေနှင့်ပစ္စည်းများပေးအပ် ခဲ့သည်။
၄င်းနောက်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မှ နားရောဂါဝေဒနာရှင်များအား ခွဲစိတ်ကုသပေးသော အထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာစိမ်းလဲ့သွင်နှင့်အဖွဲ့အား ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပြီး လက်ဆောင်နှင့်ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ခဲ့သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သည် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလုပ်ငန်းများအား အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်သူများ၏လူမှုစီးပွား ဘ၀မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးများက်ို စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိရာ ပေါက်မြို့နယ်မှ နားမကြားလူနာများအား တိုင်းဒေသကြီးဆေးရုံကြီးသို့ ခေါ်ဆောင်၍ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသပေး ရာ အကြီးစားခွဲစိတ်မှု(၁၁)ဦး အသေးစားဆောင်ရွက်သူ(၁၇)ဦး နားကြားကိရိယာတပ်ဆင်သူ(၉)ဦးအား ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။
6:05 PM သတင်း No comments
ရေစကြို - ဒီဇင်ဘာ - ၂၉
6:04 PM သတင်း No comments
ပြော ကြားပြီး ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးဌေးလွင်မှလှူဒါန်းငွေ ရ/သုံး စာရင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြ၍တက်ရောက်သူများအား